UK oo ka walaacsan inuu Farmaajo diido Wadahadal | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Ingiriiska ayaa ugu baaqday hogaamiyeyaasha Soomaaliya inay dib ugu laabtaan Miiska Wadahadalka doorashadda, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii September 2020.
War-Saxaafadeed ay baahisay Safaaradda Ingiriiska Maanta ayaa lagu xusay in heshiiskii Sep 17 hore uu yahay wadada kaliya ee lagu gaari karo xal waara, oo lagu qaban karo doorasho nabdoon, oo si xor iyo xalaal ah ku dhacda.
"Waxaan ugu baaqeynaa Madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka inay si deg deg ah u qabtaan wadahadal shuruud aan lagu xireynin. Waa inay yimaaddaan miiska wadaadalka iyagoo u diyaarsan heshiis, si ay u sameeyaan tanaasulka lagama maarmaanka u ah doorashadda," ayaa lagu yiri qoraalka.
Ingiriiska ayaa walaac ka muujiyay in lagu guul-dareysto wadahadallada, islamarkaana uu Farmaajo uu sameyn waayo tanaasul heshisi lagu gaaro, taasoo ka dhalan karta amni-darro Muqdisho iyo degaanada kale ee Soomaaliya.
Waxay dowladda ingiriiska ugu baaqday Ciidamada dowladda inaysan ku milmin siyaasadda, islamarkaana ay diiradda saaraan shaqadii loo tababaray ee ah inay cadowga la dagaalamaan, islamarkaana ay ilaaliyaan amaanka qaranka.
Rooble iyo Madaxa Galmudug iyo HirShabeella ayay UK ku amaantay diidmada Muddo-korarsiga Farmaajo, taasoo Beesha caalamka oo kahor timdi, islamarkaana lagu cadaadiyay Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday inuu qabto doorasho.
0 Comments Topics: soomaaliya uk